केपी-माधव मिलेपछि बादललाई धोका, पूर्पुरोमा हात ! « Ok Janata Newsportal
केपी-माधव मिलेपछि बादललाई धोका, पूर्पुरोमा हात !
काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व समाधानको दिशातर्फ अघि बढ्दा राष्ट्रियसभाका उम्मेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ वा डा. खिमलाल देवकोटामध्ये एकजनाले धोका पाउने निश्चित थियो ।
पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले अन्ततः बादलले नै धोका पाउने त होइनन् भन्ने आशंकालाई बलियो तुल्याएको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गत राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुन गइरहेको उपनिर्वाचनमा बादल र देवकोटा यस्ता उम्मेदवार हुन्, जो एउटै पार्टीका दुई अलग समूहको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।
बादल नेकपा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार हुन् भने डा. देवकोटालाई एमालेको खनाल–नेपाल पक्षले उम्मेदवार बनाएको हो । देवकोटालाई काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालको उपेन्द्र–बाबुराम पक्षले समेत समर्थन जनाएको छ ।
अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीचको विवाद समाधानउन्मुख रहेको नेता तथा कार्यकर्ताहरु नै बताइरहेका छन ।
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भने यसअघि विगतमा जगतबहादुर बोगटी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुँदाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्थालाई तुलना गर्दछन् ।
उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जगतबहादुर बोगटी राष्ट्रिय सभाको सदस्य निर्वाचित हुँदाको अवस्थासँग अहिलेको अवस्था मिल्न खोज्छ । त्यतिबेला उनी राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनका पछाडि माधव नेपालसँग सीपी मैनाली पक्षधरले विद्रोह गरेका थिए ।’